Inkastoo nidaamka qalliinka cusub ee Apple - Mac OS X 10.10 Yosemite luminayey cusub keeno si aad u computer Mac doono, waxaa laga yaabaa inaad la kulmi jid gooyooyinka marka ay timaado video tafatirka, tan iyo markii a qaabab xaddidan oo ay dhisay-in software video tafatirka iMovie taageertaa kaliya. Sidaas waxa aad ka dibna samayn lahayd? Aan lahayn jiho inay ka bedel video on Mac OS X 10,10? Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
Ha welwelin. Halkan ah editor video dhamaystiran oo si sahlan loo isticmaali Yosemite - Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) waxaa lagu talinayaa. Waxa ay taageertaa dhammaan qaabab video caan ah oo ay ka mid yihiin AVI, wmv, MP4, FLV, MKV, MOV, 3GP, iwm Sidaa daraadeed, waxaad si wadajir ah u qeybaha gelin kartaa video clips ama kala si aad u hesho hal abuur leh iyo kartoo brand videos cusub. Halkan waa tuse faahfaahsan oo ku saabsan sida loo abuuro videos on Yosemite arrintan smart video editor.
Tallaabada 1. Import warbaahinta files si xaalkaa
Si aad u dajiyaan videos, audio, sawiro in xaalkaa, waxaad u tagi kartaa "File"> "Import Media" ama si toos ah jiidi oo iyaga hoos u Library Media ee app this. By jidkii, waxaa jira ayaa daaqad oo kuu ogolaanaya in aad soo dhoofsadaan files warbaahinta ka Lugood ama iMovie iwm Si aad u dhaqaajiso, kaliya u tag "File"> "Resources". Waxa kale oo aad qabsan karto video ah oo la dhisay-in iSight adigoo gujinaya "Video Rikoodh" icon ku xusan jadwalka.
Tallaabada 2. Edit videos, audio iyo sawiro
Marka dhan files warbaahinta ayaa la keeno in software, jiididda iyo hoos u iyaga waqtiga kala. Markaasay aad samayn karto hawlaha video tafatirka kala duwan oo aad jeceshahay.
Tafatirka aasaasiga ah
Waxaad laba siyaabood oo kala duwan si ay u xaalkaa video ah. Mid ka mid ah waa in ay laba jibaaraan guji video ka dibna la doorto xulasho tafatirka kala duwan. Kale waa in la garaaco ee u dhiganta button goo, Dalag, isku beddesha, Voiceover on bar qalabka.
Edit iyo kor loogu qaado audio
Haddii aad rabto in aad ku darto ah file maqal ah oo dheeraad ah sida music asalka u videos iyo sawirada, kaliya jiidi aad clip audio jecel in track music ah. Si ay u sii xaalkaa file maqal ah, kaliya laba jibaar guji clip ah. Markaas Isbatooraha Audio arbushin doonaa, waayo, inaad la qabsato goobo kala duwan sida garoonka, mugga, iyo xawaaraha ama ku darto libdhi gudaha / dibedda saamayn. Waxa kale oo aad xaq u riixi kartaa audio ah si ay u dhinto, nuqul ama jar file maqal ah.
Ku dar guurka iyo saamaynta kale
App waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad ku darto kala guurka qabow iyo saamaynta kale videos iyo sawiro. Si taas loo gaaro, kaliya tagaan si ay tab kala ee u dhow Library Warbaahinta. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan tag hage user ee Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac).
Tallaabada 3. Dhoofinta aad video abuurka
Ka dib marka aad ku eegaan saameynta, kaliya riix "Dhoofinta" button inay u dhoofiyaan abuure video ah. Gebi Waxaa jira shan hababka: Qalabka, qaabab, YouTube, Facebook iyo DVD. Just dooro mid kasta oo aad rabto in aad si loo badbaadiyo ama wadaagaan videos saxar ah.
Hel weyn DVD gubi aan Watermark
> Resource > Video > Sida loo Edit Video Faylal ay ku Mac OS X Yosemite